Sidee loo hagaajiyaa liiska alaabta ee Amazon oo raadineysa ereyga?
Liisaska waxsoosaarka ee Amazon iyo raadinta ereyga waxay u badan tahay labada qaybood ee ugu weyn ee tartankaaga. Waxaan u jeedaa tayada liiskaaga liiskaaga, sharaxaadda badeecada iyo qoraalka rasmiga ah ee ku saabsan dalabkaaga - dhammaantood waxay ku soo laabanayaan xaqiiqada ereyada muhiimka ah iyo isticmaalka haboon. Sidaa darteed, waxaad ka qaadi kartaa gees ka mid ah tartamayaasha ku yaal Amazon iyadoo raadinta ereyga lagu xaliyo habka saxda ah - crushable winter hats. Waxaan rabaa in aan ku tuso dhawr fursadood oo aad u fiican oo aad ku boodi karto cilmi-baaris ku-sheegid muhiim ah oo loo yaqaan 'ecommerce-oriented keyword and optimization listing product.
Laakiin ka hor inta aanan bilaabin, waxaan kugula talinayaa inaad haysato laba-jeeg si looga fogaado arimahan soo socda:
iyo dhibcaha kuraasta ma aha kuwo hodan leh ereyada muhiimka ah iyo jumlado muhiim ah oo dheer.
Qayb kasta oo ku xusan waxay u muuqataa mid si xad dhaaf ah ugu sharraxan ereyada muhiimka ah, sidaas darteed wax kasta oo la isku rogay.
Lahaanshaha tirada sawirrada ee aan ku filnayn ama maaddada muuqaalka tayadoodu hooseeyso (xusuuso in hal ama laba sawiradood ee sheyga ah waligood ma heli doontid meel - ha aan wajahno).
Maqnaanshaha macluumaadka muhiimka ah ee qaybta leh sharaxaadda badeecada ama qodobbada qodobbada.
Marka aad hubiso in wax walba ay la socdaan liiskaaga sheygaaga, waa wakhti aad ku hesho fursado balaadhan oo Amazon leh raadinta ereyga. Habkaas, waxaad u baahan doontaa inaad hesho sawir weyn oo ah keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan tartamayaasha ugu dhow. Dhinaca kale, waa lagama maarmaan in la fahmo isbedel dhabta ah ee raadinta erayada Amazon si looga dhigo midka ugu dheer ee codsiyada dheeraadka ah ee loo isticmaalo dukaanleyda ku nool halkaa. Halkan waxaa ah marka qalabyada muhiimka ah ee software-ka ay soo galaan ciyaar! Iyada oo ka mid ah kala duwanaanta kala duwan ee fursadaha kala duwan, Waxaan ku talin karaa labada soo socda caawiye online leh isticmaalka ku-xaqiijin isticmaalka.
Ereyada Merchant waa qalab weyn oo loogu talagalay raadinta erayga Amazon. Waxay kaa caawin kartaa inaad sii wado wanaajinta bogagga alaabtaada si ay uula socdaan codsiyada dhabta ah ee rasmiga ah. Ugu dambeyntii - in lagu muujiyo sare ee raadinta khuseeya. Isku day erayada Ganacsi ahaaneed si aad u fahamto shuruudaha erayada ay heleen qiyaasta ugu sareysa ee raadinta ee adiga kugu habboon. Ogsoonow in doorashadani loogu talagalay si gaar ah loogu talagalay moobiilka e-macaamiisha iyo macaamiil-saaridda maraakiibta gaar ahaan. Waxaa ka mid ah dhinacyada ugu xooggan, qalabku sidoo kale wuxuu ururiyaa keywords ugu isticmaalo ma aha oo keliya Amazon laftiisa laakiin wuxuu soo ururiyaa jumlada sare ee laga isticmaalo meelaha kale sida Jet iyo Walmart.
Xirfadu waxay noqon kartaa saaxiib wanaagsan oo ah ganacsi kasta oo ganacsi oo iibiya Amazon. Maxaa badanaa - qalabka cilmi baarista iyo sheyga wax-soo-saarka ayaa muujinaya awooda ugu dambeysa markaad u baahan tahay fikrado aad u qiime badan. Si fudud u dhiib, Qaybi wuxuu kaa caawin karaa inaad ogaato sida ugu fiican ee erayada muhiimka ah ee ugu sarreeya iyo jumlada raadinta ee ugu sarreeya iibka ee Amazon darajo. Isla mar ahaantaana, qalabkani wuxuu ku tusi karaa in aad karti u leedahay bandhigida ereyada ku siinaya talooyin macquul ah oo ku saabsan keywords caan ah oo laga yaabo in ay mudan tahay inaad si taxadar leh u fiirsato waqtigaaga. Baaxadda waxay leedahay sidoo kale muuqaal aan la taaban karo oo u oggolaanaya in la hagaajiyo ololayaasha PPC si ay ugu ordaan heerka ugu sarreeya. Sidaa darteed, ha ka waaban inaad isku daydo oo aad aragto waxa niches ay sugayaan oo kaliya si aad u liis garaynaya liiska alaabta. Nasiib wacan!